Kodzero-dzevanhu, 01 Ndira 2015
Ndira 01, 2015
Mutauro Woramba Kupera muZanu-PF
Kunetsana muZanu-PF kuri kuramba kuchienderera mberi kunyange hazvo bato iri rakambozivisa kuti panopera kongiresi yakaitwa muna Zvita gore rapera zviri kunetsa zvinenge zvagadziriswa.
Makambani eNharembozha Anobvuma Kuderedza Mitengo
Makambani enharembozha anonzi abvuma kutevera kurudziro yakaitwa muna Gumiguru wegore rapera neboka rinoongorora mafambisirwo emashoko munyika rePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAZ, yekuti mitengo yekushandisa nharembozha ideredzwe
Zvita 31, 2014
South Africa Yopeta Chirongwa Chekupa Vana veZimbabwe Mapepa eKushanda
Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa, VaMalusi Gigaba, vazivisa kuti chirongwa chekupa vana veZimbabwe mapepa ekushanda kana kudzidza munyika iyi zviri pamutemo kana kuti Zimbabwwe Special Permit chiri kupetwa neChitatu.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zvakapotera paChechi yeMethodist muJohanneburg Zvodzingwa
Musi weChitatu range riri zuva rekupedzisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvange zvakapotera pachechi yeMethodist Church muJohannesburg zvinge zvabva panzvimbo iyi.
Vanhu Vana Vanobata Chirwere cheTyphoid muHarare
Mukuru webazi rezve hutano mukanzuru yeHarare, Dr Prosper Chonzi, vanoti chirwere chetyphoid chadzoka muHarare uye chiri kuwanikwa muBudiriro ne Glenview pari zvino.
PTUZ Inoti Hurumende Yakundikana Kuvabhadhara Bhonasi
PTUZ inoti haisi kufara nekwainoti kukundikana kwehurumende kuzadzisa chivimbiso chayo chekuti ichabhadhara vamwe vevashandi vayo vasati vawana mari dzavo dzebhonasi mwedzi uno
Zimbabwe Inonzi Imwe yeNyika Dzisina Kugadzikana
Rimwe sangano ravanachipangamazano muAmerica, reFund for Peace, rinoti zvinhu muZimbabwe hazvina kunyatsogadzikana zvekuti Zimbabwe yabva yaiswa panyika dzine hondo dzakaita seYemen, Iraq, Afghanistan, Chad nedzimwe.
Vanhu Makumi Masere neVasere Vanofa Munyodzi Mumigwagwa
Vanhu vakawanda vari kuramba vachifa munjodzi dzemumigwagwa pazororo rino rekisimusi zvichienzaniswa nevakafa gore rapera.
Zvita 29, 2014
Hurumende Inonzi Haisati Yapindura Magwaro Akakwidzwa Mudare rePamusoro naVana Chiremba
Gurukota rinoona nezvehutano, Dr David Parirenyatwa, nemunyori mukuru mubazi ravo, Dr Gerald Gwinji, vanonzi havasati vapindura magwaro ari kudare repamusoro akaendeswa navanachiremba vachiti danho ravakatora rekuvabvisira mari dzemihoro mushure mekuratidzira rainge risiri pamutemo.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zvoshushikana neKubviswa paChechi yeMethodist muSouth Africa
Chechi yeMethodist muJohannesburg South Africa iyo yange ichichengeta zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri munyika iyi zvinonzi zvinodarika mazana mashanu yave kubvisa vapoteri ava mukupera kwemwedzi uno.
Chikwata Chinotsigira VaMnangagwa Chokandirana Makobvu neMatete
Vamwe muZanu PF vanoti vari kurumbidza VaMnangagwa ava vava kukonzera kuti VaMugabe vaonekwe kunge havasisiri mutungamiri wenyika.
Varairidzi Vochemera Bhonasi Yavo
Gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vanoti hurumende haina mari zvinova zviri kupa kuti ipe vashandi mabhonasi munguva dzakasiyana siyana.